China Track Linear Actuator 12v 24v FD3 fekitori uye vagadziri | Sanxing
Iyo FD3 Linear Actuator ndeye Track Linear Actuator, inoshandisa track trackar yekufamba dhizaini. Iyo yakasarudzika kuvaka inobvumidza kunyorera iyo inoda yakamisikidzwa yekumisikidza mapoinzi. Inoshandiswa zvakanyanya kune fanicha uye kumba otomatiki, semuenzaniso sofa remagetsi, kusimudzira kweTV.
5000N (Push) / 4000N (Dhonza)
1. Mota yacho yaive yakaputirwa neimba yepurasitiki, izvi zvinopa kupisa kupisa, kuputira guruva uye kuputira ruzha.
2. Iyo yekumashure yekubatanidza inosanganisirwa neyepurasitiki dzimba.
Iyo actuator inoshanda kuburikidza nechena epurasitiki block. Iri bhuroko rakagadzirwa nePOM, rinogona kutora mutoro 5000N iwo max.
Kazhinji, pane chidimbu chesimbi chakaiswa pamusoro weactuator.
Kana vashandisi vasingaidi, chidimbu chesimbi hachizoiswa pairi, ndapota tarisa mifananidzo iri pazasi kuti uone.
Iyo FD3 actuator inoshandiswa zvakanyanya pakusimudza TV (uchishandisa neTV inosimudza mabhureki - SXTL TV Simudza ), Inogona kuiswa mukabati, kana inogona kuiswa kumagumo emubhedha. Inozivikanwa kwazvo muhofisi uye kumba izvozvi.
Iyo FD3 actuator inogona kushandiswa iyo yekusimudza yeLCD kana vashandisi vaine yavo mabhureki. Sanxing remote control isarudzo yesarudzo.
Kubva pazuva rekusvitswa mukati memwedzi gumi nemaviri, mushandisi mune zvakajairwa mamiriro, aine akakwirisa actuator mhando nyaya dzinokonzereswa nemishini kukundikana kana kukuvara, fekitori yedu inoona nezvekuchengetedza.
Pashure: DC Linear Actuator Magetsi FD1
Zvadaro: Linear Actuator 24v FD4
Electric Bed Remote Kudzora, Chipatara Mubhedha Remote Kudzora, Medical Mubhedha Remote Kudzora, Micro Linear Actuator, Wireless Remote Kudzora Kwechipatara, Yekumhanya Yekukurumidza Linear Actuator,